Afhayeenka WADDANI oo soo Jeediyey in Cabdiraxmaan Aw Cali loo Dhiibo Xilka Guurtida Marka uu Kursiga Guddoomiye Saleebaan | Berberanews.com
Home WARARKA Afhayeenka WADDANI oo soo Jeediyey in Cabdiraxmaan Aw Cali loo Dhiibo Xilka...
Hargeysa (Berberanews)- Afhayeenka xisbiga mucaaridka ah eeWADDANI Md. Barkhad Jaamac Batuun oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ah ee ku jira saxaafaddasiyaasadda Somaliland, ayaa soo jeediyey in Madaxweyne-ku-xigeenkii labaad ee Somaliland Muj. Cabdiraxmaan Aw Cali Faarax loo dhiibo xilkaGuddoomiyenimo ee Golaha Guurtida Somaliland marka uu kursigaas banneeyo Guddoomiyaha haddaxilka haya Md. Saleebaan Maxamuud Aadan.
Qoraal uu Afhayeen Barkhad Jaamac Batuun kufaafiyey baraha bulshada (Social media), gaar ahaanbarta facebook-giisa maanta (Axadda, 05 July 2020), waxa uu ku soo bandhigay aqoonta uu u leeyahayMujaahid Cabdiraxmaan Aw Cali Faarax oo uu xusayinay muddo toddoba sanno ah Jaamacadda Hargeysaku soo wada qaateen labada kulliyadood ee culuumtasharciga iyo xallinta khilaafaadka, isagoo xusay in Mujaahidku yahay oday waayo-arag ah oo si fiican uguhabboon xilka Guddoomiyaha Golaha Guurtida.
Qoraalka Garyaqaan Barkhad Jaamac Batuun soosaaray oo faahfaahsan waxa uu u qornaa sidan;
“Mujaahid Madaxweyne Cabdiraxmaan Aw Cali Faarax toddoba sanno ayaan fursad qofeed u helay in aanu labada kulliyadood ee Sharciga iyo xallintakhilaafadka ka wada dhigannay Jaamacadda Hargeysa, isaga oo ah Madaxweyne ummadda u soo adeegay, isaga oo da’ ahaan naga weyn, isaga oo Jaamacaddahore ka soo baxay, isla jeerkaana leh waayo-aragnimosiyaasaddeed iyo mid ciidan.
Wuxuu noo ahaa saaxiib weyn, walaal, wehel iyowaalid fursad na siin jiray, waxaannu ahayn fadhi-wadaag shaah iyo sheeko dhex marto mar kastoofiraaqo aanu helno xilligii ardaynimo. Waa qoftawaaduc iyo is dhul dhig badan oo aan qab iyo kibirqofeed lahayn, shakhsi macaan oo dammal ah, haybadna Alle siiyay. Talo-qabeen dad isku wad leh, taariikh-yahan aanad ka dhergayn maalmihii meertadanolosha ee uu soo maray badankooda.
Aragtidayda shaqsiyadeed, waxaan qabaa in uu maantayahay qofka ugu mudan ee hoggaamin kara GolahaGuurtida Jamhuuriyadda Somaliland markaydhammaato muddo xileedka guddoomiyaha haddajooga Mudane Saleebaan Maxamuud Aadan oo runtimuddo dheer qaranka u shaqeynayey, ahna oday weynoo muxtarim ah iyo siyaasi ruug-cadaadi ah.
Mujaahid Cabdiraxmaan Aw Cali Faarax waahalgamaa dalkan xorreeyay, waa halyeey hoggaamiyeymasiirka siyaasaddeed ee ummaddan, waa odaydhaqan-yaqaan ah, waa nin aan godob reereed laheyn, waa nin aanay Somaliland wax uga sarreeya jirin, waanin aqoon sharci iyo mid xallin khilaafeedba leh.
Waa nin edeb iyo afgaabni ku caanbaxay, waana ninmaalinta ay adkaato lagu baxsado talo qabeenimadiisa, ayaamo adagna bad-baadinta qaranka qallinkataarikhda ugu qoran, gaar ahaan muddooyinka ay jireenkhilaafadka siyaasaddeed ee xisbiyada iyoXukuumadihii dalka soo maray, waana nin bilcin karasawirka siyaasadeed ee saami-qeybsiga Somaliland.
Sawira’uun iyada oo sidan ah:
Madaxweyne Hargeysa ah, Guddoomiye GolahaWakiillo oo Laas-caanood ah, Guddoomiye Guurti ooBoorama ah, Guddoomiye Maxkamadda Sarre ooGabooye ah,” ayuu yidhi Afhayeenka xisbigamucaaridka ah ee WADDANI Md. Barkhad JaamacBatuun.
Previous articleWaa maxay sababta Taiwan ugu faanayso xidhiidhka Somaliland?
Next articleSomaliland: kiisaska cusub ee laga helay Covid-19